Xaliimo Yarey oo jawaab ka bixisay eedeyntii Madasha - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Xaliimo Yarey oo jawaab ka bixisay eedeyntii Madasha
Xaliimo Yarey oo jawaab ka bixisay eedeyntii Madasha
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) ayaa markii ugu horreysay ka jawaabtay eedeyn uga timid xisbiyada qaar, gaar ahaan kuwa ku mideysan Madasha Xisbiyada Qaran ee uu guddoomiyaha u yahay Madaxweyne hore, Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale waxa ay iyada oo ka jaabeysa hadalkii Madasha Xisbiyada ay shaaciyay in guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka uusan laheyn wax dambi ah oo la xariira shaqada loo igmaday, islamarkaana uu isku casili karo, sida ay hadalka u dhigtay.
“Anaga waxaan is casileynaa hadii aan dambiile noqono oo haqadii naloo diray aan qaban weyno,feberaayo 2017 ayaan sheegnay in ay ka maqan yihiin waxyaabihii doorashada lagu qaban lahaa welina ma helin laakin in Guddiga la iska eedeeyo ma ahan ayay tiri” Guddoomiye Xaliimo Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaano (Xaliimo Yarey).
Previous articleFaroole “Dalkii god buu ku socdaa Madaxweynaha ayaa godka ku riday”
Next articleUS counter-terrorism campaigns on Somalia